Tag: pr qaybinta | Martech Zone
Tag: pr qaybinta
Sida Loo Wanaajiyo Warsaxaafadeed Raadin
Tuesday, April 5, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan la shaqeynaa qaar ka mid ah shirkadaha xiriirka dadweynaha ee cajiibka ah nafteena iyo macaamiisheena. Xiriirka dadweynaha wali waa maalgashi weyn - dadkeenna ku sugan Dittoe PR waxay naga heleen tixraacyo New York Times, Mashable iyo goobo kale oo caan ah. In kasta oo xirfadleyaasha PR ay fahmayaan sida loo qoro war-saxaafadeedyo adag oo loogu qaybiyo dhagaystayaasha saxda ah, mararka qaarkood iyagu ma hagaajiyaan war-saxaafadeedyada sidoo kale waxay ahaan karaan
WordPress Plugin: Liistada Hubinta qoraalka
Talaado, Disembar 21, 2010 Axad, Janaayo 19, 2014 Gowraca Robby
Ku noqo BlogIndiana 2010, waxaan u sameynay jilitaan jilicsan oo loogu talagalay WordPress plugin si looga caawiyo kordhinta wax soo saarka shaqaalaha. Waxaa loo yaqaan 'Blogging Checklist', waxayna ku saleysan tahay awood aan la rumaysan karin oo fudud oo haddana yaab leh oo liistada hubinta ah. Liistada hubinta Blogging-ka waa sida ay u egtahay oo kale: waxay kuu abuureysaa sanduuqyo hubin badan oo aad adigu isticmaali karto marka aad qoraysid boostada. Xaqiiqdii, waxaad ku guuleysan kartaa isla wax la mid ah dukumintiga ereyga ama qoraal qoraal ah, laakiin
Wednesday, May 28, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Su’aal xiiso badan ayaa maanta la iisoo diray waxaanan jeclaystay inaan idinla wadaago dadweynow si aan fikirkaaga u helo. Ma jirtaa hab fudud oo lagu sheegi karo inta boggag ee uu qoraalo buugga qof leeyahay? Iyadoo WordPress, waa quruxsan fudud (laga yaabee mid aad u fudud). Isku duubista qoraal kasta waa qeexitaan leh Aqoonsiga Boosta. Aqoonsiga Boostadu wuxuu lamid yahay tirada boostooyinka. Waad ku mahadsan tahay xisaab-celin! :) Waan yara yaabay taas
Waad Heli Kartaa Web 2.0 Dhibaato Marka…
Khamiis, Janaayo 3, 2008 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Ka dib markii aan la kulmay balwadaha cusub ee xiriirka bulshada, Dr. Thomas Ho, waxaa i soo jiitay mid ka mid ah adeegyadii uu adeegsaday, Profilactic.com. Fiidiyowga kor ku xusan (ku dhufo boostada) waa aalad aan ku dhisay anigoo adeegsanaya adeegga Profilactic. Waa liis ay ku qoran yihiin dhammaan shabakadaha '2.0' ee aan ka tirsan ahay… waxaad ka heli kartaa boggeyga cusub ee loogu talagalay. Waxaan u maleynayaa inaan dhibaato haysto! Haddii aad ka mid tahay kuwaas